नेपाल लाइभ बुधबार, चैत १९, २०७६, १३:४८
काठमाडौं- लकडाउन भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको दैनिकी पहिलेभन्दा केही परिर्वतन भएको छ। पहिला मन्त्रालयका अन्य काममा व्यस्त रहने भट्ट अहिले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको गुनासो सुन्ने र निर्देशन दिने काममै केन्द्रित हुने गरेका छन्।
अहिले सबैभन्दा धेरै दैनिक उपभोग्य र अत्याआवश्यक सामाग्री दाल, चामल, नुन, तेल, ग्यास र डिजेल, पेट्रोल लगायत वस्तु उपभोगताले पाए कि पाएनन् भन्नेमै आफ्नो ध्यान जाने गरेको मन्त्री भट्ट बताउँछन्।
‘यसअघि आफ्नो निवास र मन्त्रालयमा आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र मन्त्रालयका काम लिएर आउनेसँग समय खर्च हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको अवस्थाको रिर्पोटिङ लिने र निर्देशन दिनेमै समय बित्ने गरेको छ।‘
उनी मन्त्रालयमा गएर विभाग प्रमुख र महाशाखाका प्रमुखसँग दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको अवस्थाको विषयमा रिर्पोट लिने गर्छन्। कतै उपभोगताले अभाव भयो भन्ने गुनासो आएर आलोचित भइन्छ कि भन्नेमा भट्ट चिन्तित सुनिन्छन्।
उनी बिहान ५ बजे उठ्छन्। लगतै पसिना आउनेगरी एक्सरसाइज गर्छन्। त्यसपछि नुहाउने र पत्रिका र अनलाइन सरसर्री हेर्ने उनको दैनिकी छ।
‘आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या वा गुनासा भए टिपोट गर्छु। त्यो टिपोट तुरुन्तै सम्बन्धित विभाग वा महाशाखालाई भन्नुपर्ने भएमा समाधान गर्नुस् भन्छु। त्यो भोलि होइन, तत्काल गर्नु पर्छ भन्ने हुन्छ। त्यसपछि फोनबाटै देशैभर पेट्रोलियमको अवस्था कस्तो छ? कति दिनलाई पुग्छ? कहाँ पम्पहरु खुलेका छन् वा छैनन् सबै रिर्पोट लिन्छु। अरु दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति कस्तो छ भनेर सम्बन्धित विभाग प्रमुखलाई कहिले फोनमा, कहिले निवास वा मन्त्रालयमै बोलाएर रिर्पोट लिन्छु’, भट्ट भन्छन्।
उनी बिहान सामान्यतया १० बजे मन्त्रालय पुगिसक्छन्। मन्त्रालयका गतिविधिका सम्बन्धमा महाशाखाका प्रमुखलाई बोलाएर सोध्छन्। आम मानिसका गुनासा सोध्छन्। दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको कति उपलब्धताको जानकारी लिन्छन्।
कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुनुअघि उनी अनुमगनमा समेत जाने गरेका थिए।
समानको अभाव भइहाल्छ कि भन्ने कुराले आफूलाई चिन्तित गराउने उनी बताउँछन्। ‘लकडाउनको बेलामा पहिलेभन्दा केही अभाव भइहाल्छ। पहिले जस्तो सहज कहाँ हुन्छ? त्यही पनि आफूले सकेको दैनिक उपभोग्य सामाग्री सहज बनाउन दैनिक रुपमा आफैं खटेको छु’, उनी भन्छन्, ‘गृह मन्त्रालयले बजारमा हिँडडुल गर्न कडाई गरेको छ। दैनिक उपभोग्य सामाग्री खरिद गर्न पहिलेजस्तो सजिलो छैन। केही सीमित सुपर मार्केट र किराना पसल खुलेका छन्। त्यसैले उपभोगतालाई खरिद गर्न गाह्रो पनि छ।‘
मन्त्री भट्टले आपूर्तिको सम्बन्धमा कस्तो अवस्था छ, अभाव कस्तो छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीबाट समेत जानकारी लिने गरेका छन्। त्यसो त, उनलाई अहिले दैनिक रुपमा विभाग प्रमुख र महाशाखा प्रमुखले बेलुका आफ्नो रिर्पोट दिन्छन्।
‘दाल चामलको अवस्था कस्तो छ? सिलिण्डर र पेट्रोलियम कति बिक्री भयो? कुनै सामाग्रीको अभाव भए मेरो स्वकीय सचिव र वाणिज्य विभाग प्रमुखको फोन नम्बर उपलब्ध गराइएको छ। त्यसमा फोन गरेर आफ्ना समस्या वा गुणासा राख्न सक्नु हुने छ। मोबाइलमा गुनासा वा समस्या आए लगत्तै सम्बन्धित विभाग वा महाशाखालाई सम्बोधन गर्ने भन्छु’, उनले भने।
दिनभर मन्त्रालयको काममै व्यस्त रहने मन्त्री भट्टको निवास फर्किने समय निश्चित हुदैन। कहिले दिउँसै आउँछन्। कहिले अबेला आइपुग्छन्। तर निवासमा पनि काम जारी नै रहन्छ। ‘निवासमा पनि गृह, परराष्ट्र, पर्यटन, स्वास्थ्य सल्लाह गर्छु’, उनी भन्छन्।
आपूर्तिको काममा केन्द्रित भएका मन्त्री भट्ट दैनिक उपभोग्य सामाग्री दाल चामल, नुन, तेल लगायत सामाग्रीको ५/६ महिनालाई पुग्ने स्टक रहेको बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थको माग घटेको र त्यो पनि ६ महिनाभन्दा धेरै समयलाई पुग्ने भएको तथ्यांक पेश गर्छन्।
‘ग्यासको कुनै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। गृह प्रशासनले अलि कडा गरेकाले उपभोगताले सहज रुपमा खरिद गर्न मात्रै नपाएका हुन्। त्यो काममा दैनिक खटिरहेकै छु’, उनी भन्छन्।